စိန့်မာတင်ဒပွဲခံ - ရိုးရာနှင့်နေဆဲလက်ရှိ
စိန့်မာတင် - အကောက်ခွန်နှင့်ခေတ်သစ်
Tours မှ၏စိန့်မာတင်ဒပွဲခံသည့် 11 ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလကျင်းပများနှင့်ဒေသအများအပြားတွင်ကွဲပြားခြားနား oriented ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, စိန့်မာတင်နှင့်ကျော်ကြားသောလုပ်ဆောင်ချက်၏ပုံပြင် - ထိုဝတ်လုံကို share - နေရာတိုင်းမှာ။
အဆိုပါ 11 ။ နိုဝင်ဘာလကသင်္ချိုင်း Martins ၏နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်အောကျမေ့တဲ့နေ့ကအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားရာလမ်းရှိ၏။ ဒါက 397 ခဲ့ပြီးတော့ကတည်းကနေ့ကိုဗဟိုဥရောပ၌ကျင်းပလျက်ရှိသည်နှင့်ဒေသတွင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
ကြှနျုပျတို့သညျဤရက်စွဲကိုအပြီးကိုကြည့်ပါလျှင်သူကအလယ်ခေတ်ကကျူးလွန်ကြောင့်အထူးသဖြင့် Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအတွင်း, ခရစ္စမတ်နှင့်ဥပုသ်၏အစမပြုမီ 40 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိန့်မာတင်ဒပွဲတော်ကြီးမှဥပုသ်ရဲ့အစမှာလိုပဲလူတွေကအဲဒီမှာရှေ့တော်၌ထိုနောက်နေ့ 40 သာမဖြစ်စလောက်ခသို့မဟုတ်ဘာမျှမမှလာမယ့်စားရန်သပ်ရပ်ခြင်းနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အခြားအခွင့်အလမ်း, အပ်ပေးတော်မူ၏။
အဆိုပါ Rhineland မှာ 11 ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလကိုလည်းပွဲတော်ကြီးရာသီမှစတင်မှတ်သား။ ထို့အပြင်အခွန်မကြာခဏမျိုးနှင့် Geese အသုံးပြုပုံထိုနေ့၌ပေးဆောင်ပြီ။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များဆောင်းတွင်းကျော်အောင်ကျွေးခြင်းဖြင့်မဟုတ်ရင်ပါပြီသင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်စတော့ရှယ်ယာဤနည်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းလစာအကြွေးတွေမှာပြုန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ 11 ။ နိုဝင်ဘာလသို့သော်အလုပ်အကိုင်အကြားဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်သို့မဟုတ်-စတင်ခဲ့ပြီးနေသည့်အပေါ်ပုံမှန်နေ့ကကွပွီဟုအိမ်ငှားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားတွက်ချက်မှုမှာအဆုံးသတ်နှင့်-စတင်ခဲ့ပြီးနေ။ အဆိုပါ Martini နေ့အစဉ်မပြတ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာစနဲ့အဆုံးအဘို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လည်းကူပွန်နေ့စွဲကိုခေါ်ခဲ့သည်။
အစာစားမာတင်ရဲ့ငန်းများ၏အစဉ်အလာဤနည်းရှင်းပြနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းမာတင်ငန်းနှင့်အတူဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ မာတင်ဘိရှော့သန့်ရှင်းစေရပါမည်သူချင်နှင့်ဝှကျထားခဲ့ပါဘူး။ Geese cackling သည်သူ၏ပုန်းရှောင်ရာအရပျအပျနှံသူနေဆဲသန့်ရှင်းစေရမည်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဂျာမဏီအတွက်ရိုးရာငန်းညစာန်းကျင်နေဆဲသည်အခြားပုံပြင်များပြည့်နှက်နေလေသည်ဖြစ်ပါတယ်ဖက်ထုပ်နှင့်အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူပါဆုံးဒေသများထဲတွင်ငန်းဝတ်ပြုကြ၏။
မှတ်စုများနဲ့အရောင်အဘို့စာရွက်ဂီတနှင့်အတူကလေးသည်-ဖော်ရွေထုံးစံ၌စာသား Sankt မာတင်သီချင်းများ
ကလေးများမှာစိန့်မာတင်ရဲ့အပြောင်းအရွေ့အခမ်းအနားအဘို့အကြောင်းမရှိ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့ဖြစ်၏။ သေးငယ်တဲ့အသေးစိတျဒေသအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားစေခြင်းငှါသော်လည်းထိုသို့သောစီတန်းလှ, များစွာသောဥရောပနိုင်ငံများတွင်ကျင်းပကြသည်။ သို့သော်မြို့မှတဆင့်မီးအိမ်သို့မဟုတ်မီးနှင့်အတူအပေါငျးတို့သချီတက်ပွဲမှဘုံ။ အဆိုပါမီးအိမ်ဖြစ်စေသူငယ်တန်းနှင့်ကျောင်းကလေးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ထံမှဝယ်ယူသို့မဟုတ်ထွင်းထုနေကြသည်။
အဆိုပါစစ်ရေးပြဒေသခံပျိုးခင်းရွာကျောင်းကနေကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စီတန်းထက်အခြားရက်စွဲတစ်ခုမှာရာအရပ်ကိုကြာပြီးသော၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီတန်းရှိသည်နိုငျသညျ, ငယ်ကျေးရွာများတွင်ကျင်းပကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိန့်မာတင်ရဲ့အပြောင်းအရွေ့ရှုမြင်အချို့အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီမှာစိန့်မာတင်အတွက်လုံလောက်သောသဘင်သည်မဟုတ်, သက်ညှာနှင့်ရထားတစ်ခါသာရာအရပ်ကိုကြာလျှင်။
ဒီအပြောင်းအရွေ့နှင့်အတူ, လူများကိုလည်းတပ်ဆင်ထားစိန့်မာတင်ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်။ ဒါဟာဒေသအပေါ်တစ်ဦးသည်ရောမစစ်သား၏ဝတ်စုံ မူတည်. စေတယ်။ သင်တန်းသားများကိုသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်မာတင်ခညျြအနှောချီတက်လိုက်ပါလိမ့်မည်။ ယခင်က Zugteilnehmer ၏ဆိုက်ရောက်မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတင်းကျပ်စောင့်ကြည့်စိန့်မာတင်မီးအောက်မှာကိုပြင်ဆင်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ချီတက်ပွဲရဲ့အဆုံးမှာ။
စိန့်မာတင် - Moving သီချင်းများနှင့် St. မာတင်-Ffeuer
အဆိုပါသရုပ်ဆောင်စိန့်မာတင်, ဒီအခိုက်မှာရထား၏သင်တန်းသားများကိုစကားအနည်းငယ်စီရင်မည်ဖြစ်ကောင်းသူတောင်းစား၏ဇာတ်လမ်းနှင့် shell ကိုကွဲပြားခြင်းသတိရပါ။ များစွာသောအရပ်တွင်, ဒီမြင်ကွင်းကိုလည်း re-ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
ဒီနောက်တွင်သူမ၏မီးရှူးတိုင်နှင့်အတူရထားလိုက်ပါသွားသူကလေးရဖို့ Weckmann, Stutenkerl သို့မဟုတ် မာတင် Geese ချိုမြိန်သောတဆေးသည်မုန့်စိမ်း၏, ထိုဒေသပေါ် မူတည်. ။
စိန့်မာတင်အပေါ်အကြီးမားဆုံးစစ်ရေးပြ Kempen နှင့် Bocholt အတွက်, Worms-Hochheim အတွက်ကျင်းပကြသည်။ ဤရွေ့ကားစရိုက်များ 6.000 သင်တန်းသားများမှတက်လျင်မြန်စွာဖြစ်ကြသည်။ သားသမီးတို့အဘို့, ပှဲနေ့စိန့်မာတင်ဆောင်းဦးအတွက်အဓိကပွဲတော်များတစ်ခုဖြစ်တယ်။
သူတို့ကအစောပိုင်းအပေါ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်မီးအိမ်ဒါမှသာတကယ်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ သဘာဝကျကျသေးငယ်သားသမီးတို့သည်မိဘများ၏ထောက်ခံမှုရပေမယ့်သူကပင်ပြီးပြည့်စုံသောမဖွစျရမယျ။ ပရိသလည်းသီဆိုနေစဉ်, ပူပြင်းတဲ့ကိုကိုးနှင့် cookies နဲ့လက်မှုပညာဟာကပြင်ပမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ်နာရီသို့မဟုတ်မုန်တိုင်းကာလအတွင်းလည်းမရှိ, ကအိမ်တွင်းပဲလျှော့ပေါ့ပါတယ်။
အဟောင်းတွေကျောင်းကကလေးတွေကျောင်းမှာအတန်းအစားစဉ်အတွင်းတစ်မီးရှူးတိုင်သင်တန်းပါစေ။ ယခင်ကကလနျ့စရာအလှနျမျက်နှာတစ်ဆွန်း beet ထွက်ထွင်းဖို့ဓလေ့ထုံးတမ်းခဲ့ပြီးတော့တစ်ဦးမီးရှူးတိုင်အတိုင်းဤမုန်လာဉဝါကိုသုံးပါရန်။
shell ကိုမှလာမယ့်ဝေစုနဲ့လည်းစိန့်မာတင်န်းကျင်ကတခြားအကောက်ခွန်အဆိုပါ Martinsgans ကိုစားကြလော့။ အဆိုပါ martinisingen ရွှေ့နေစဉ်, ဒါပေမယ့်အဲဒီအခြိနျပြီးနောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တိကျတဲ့ရက်စွဲမှာသီးသန့်ရာအရပ်ကိုကြာမသာ။
ဒေသအများအပြားတွင်, အမြိုးသားတို့တံခါးကို-ဖွင့်လှစ်နေရာချထားတစ်ဦးမာတင်သီချင်းသီဆို, တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သူတို့ရဲ့မီးနှင့်တကွ, အပြောင်းအရွေ့သူ့ဟာသူပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အသေးစားသနားခြင်းကရုဏာအဘို့အမေးပါ။ ဤရွေ့ကား, သင်တန်း, သကြားလုံး, အသီးများသို့မဟုတ်အခြားအသေးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. martinisingen လက်အောက်တွင်ဟောင်းထုံးစံအရှေ့ Friesland အတွက်ပရိုတက်စတအသင်းတော်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အမညျတစ်ရက်လည်း 11 အပေါ်မာတင်လူသာ, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ နိုဝင်ဘာလကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ပိုင်းဂျာမနီရှိအတွက်ဧဝံဂေလိအသင်းတော်၌ဖြစ်ပါသည် belsnickel စိန့်မာတင်အပေါ်မျှော်လင့်ထားတခါတရံလက်ဆောင်များယူဆောင်လာနှင့် Nussmärtel ဆိုလိုသည်မှာ။
စိန့်မာတင်သီချင်း - ဂီတနှင့်သီချင်းစာသား
စိန့်မာတင် Coloring ချီတက်ပွဲ lanterns
စိန့်မာတင် / စိန့်မာတင် Coloring
Marl template ကိုစိန့်မာတင်